မိတ်စာရွာသုံးရွာ လေတပ်မှ ဗုံးကြဲခံရမှုကြောင့် ရွာသားတချို့ သေဆုံးဒဏ်ရာရ
မိတ်စာရွာသုံးရွာ လေတပ်မှ ဗုံးကြဲခံရမှုကြောင့် ရွာသ...
14 มี.ค. 2563 - 14:42 น.
ပလက်ဝမြို့နယ်ထဲက ဆမီးမြို့နဲ့ ကုလားတန်မြစ်ကြား မီးချောင်းကမ်းနဘေးက မိစာရွာ သုံးရွာကို မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ မနက် ၁၀ နာရီလောက်က တပ်မတော်လေယာဉ်တွေက ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့် ရွာသား လေးယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ရွာဒေသခံတွေက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ဆယ်နာရီလောက်မှာ တိုက်လေယာဉ်နဲ့ မိတ်စာ၁ ကိုပစ်နောက် မိနစ်ပိုင်းပဲ ခြားတယ် မိတ်စာ ၂ ကို ပစ်တယ်။ မိတ်စာရွာ ၁ ၊ ၂၊၃ အကုန်လုံး အထက ကျောင်းနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ခိုနေကြတယ်။ အခုလောလောဆယ်သေဆုံးသူ လေးယောက်ရှိတယ် လို့ မိတ်စာရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမောင်စံသာက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
သေဆုံးသူတွေကိုတော့ လက်ရှိမှာ အတည်မပြုနိုင်သေးပဲ လေးယောက်ကနေ ခြောက်ယောက် အထိ ရှိနိုင်ပြီး ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကတော့ လေးယောက် ရှိတယ်လို့ ဦးမောင်စံသာက ဆိုပါတယ်။ သေဆုံးသူတွေ စီစစ်ဖို့ရွာသားတွေ အဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့ထားပြီး လေယာဉ်တွေ အခုချိန်ထိ ရွာမှာ ပျံဝဲနေသေးတာကြောင့် ပုန်းခိုရာကနေ အပြင်ကို မထွက်ရဲသေးဘူးလို့ ရွာသားတွေက ပြောပါတယ်။
သေဆုံးသွားသူ ရွာသားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးအင်္ဂါရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ မခိုင်သန်းနုကတော့ သူ့ယောက်ကျားသေဆုံးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မတို့လည်း အိမ်မှာ နေတာ ကျွန်မက ကလေးနို့တိုက်နေတာ ယောကျာ်းက ဝက်စာကျွေးနေတာ။ ဗုံးက ချပလိုက်တာ နဲ့ အိမ်နားက အကိုကြီးအိမ်ကော အမကြီးအိမ်ကော အကုန်လောင်သွားတာ။နောက် ဗုံးထပ်ကွဲပီးမှ ကျွန်မယောကျာ်း တခါထဲသေသွားတာလို့ ပြောပါတယ်။
မြောက်ဦးနဲ့ ကျောက်တော်မှာ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်၊ အရပ်သား ထိခိုက်သေဆုံးပြီး တိမ်ညိုဆေးရုံယာယီပိတ်
ဒဏ်ရာရ တပ်မတော်သားအချို့ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ အေအေဆက်သွယ်လာ
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ရဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ရွာကိုတော့ တိုက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ ပလက်ဝနဲ့ ကျောက်တော်ကြားမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတာတော့ရှိပါတယ်။ ပြည်သူလူထုနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ကာကွယ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ ရွာသားအရပ်ဝတ်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်တာရှိပါတယ်။ ရွာနားက မိုင်းထောင်မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်တော့ ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရတော့ ပစ်ခတ်တဲ့နေရာကို ပြန်လည်ပစ်ခတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရွာသားတွေသေဆုံးခြင်း မသေဆုံးခြင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ အတည်ပြုလို့မရဘူး လို့ဆိုပါတယ်။
အခု တပ်မတော်ရဲ့ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့ မိတ်စာ ရွာသုံးရွာဟာ ချင်းလူမျိုး အများစုနေထိုင်တဲ့ ရွာတွေဖြစ်ပြီး တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြနေရာတွေနဲ့ ဝေးတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
တပ်မတော်နဲ့ ရခိုင်တပ် အေအေရဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြားထဲမှာ အရပ်သားသေဆုံးမှုတွေဟာ မြင့်တက်လာပြီး ချင်းပြည်နယ်ပလက်ဝနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် တွင်းမှာလည်း တနေ့ထက်တနေ့ စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်တွေက တိုးပွား လာနေတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ကျောက်တော်နဲ့ ပလက်ဝကြားမှာ တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်နေပြီး မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့နဲ့ ၁၁ ရက်နေ့တွေမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြားထဲ တပ်ဖက်က တပ်ရင်းမှူးတစ်ဦးအပါအဝင် တပ်မတော်သား ၃၀ကျော်ကို ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်း ရခိုင့်တပ် အေအေက ထုတ်ပြန်ထားသလို အဲဒီဖမ်းဆီးမိတဲ့ တပ်မတော်သားတွေအနက် နှစ်ဦးဟာ ဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရခဲ့တာကြောင့် တပ်ဖက်က ဆေးကုသဖို့ ပြန်ခေါ်ယူနိုင်ကြောင်း စာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့နယ်နဲ့ ကျောက်တော်မြို့နယ်တွေမှာ ပစ်ခတ်မှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အရပ်သားထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေ ရှိတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
အဲဒီပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်တွေ အတွင်းမှာ မြောက်ဦးမြို့နယ် တိမ်ညိုစစ်ပြေးရှောင်စခန်းနဲ့ တိမ်ညိုရွာက ၁၂ဦး၊ ပေါင်းတုတ် မွတ်ဆလင်ကျေးရွာက ၈ ဦး၊ တောင်ဦးက ၁ဦးနဲ့ ကျောက်တော်မြို့နယ် သရက်တစ်ပင် သိန်းတန်ရွာက ၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ မိတ်စာရွာသုံးရွာ လေတပ်မှ ဗုံးကြဲခံရမှုကြောင့် ရွာသားတချို့ သေဆုံးဒဏ်ရာရ